Heart Museum: အပျင်းပြေ၊ဒေါသပြေအောင် ဒီကောင့်ပါးကို ရိုက်ရအောင်။
အပျင်းပြေ၊ဒေါသပြေအောင် ဒီကောင့်ပါးကို ရိုက်ရအောင်။
Click in the box and then move your mouse around.
***ညီမလေးBlaz အတွက် ကျွန်တော့်လက်ဆောင်***
Posted by Heartmuseum at 11:45 PM
Blazing inferno said...
What can i say?? =)
Thank you so much..I mean it
I really vent my anger over this game
Thank you very much my bro !!!
Lol. Cool. Stress reliever. :)